ညီလင်းသစ်: January 2009
မနက်ဖြန်မှာ ကျနော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကို တစ်ပတ်ကြာ ခရီးသွားဖို့ရှိပါတယ်၊ ဒီအတောအတွင်းမှာ ပို့စ် အသစ်တင်ဖြစ်ဦးမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး၊
ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာ ရေးစရာတွေတန်းစီ ပေါ်လာပေမယ့် ခရီးမသွားခင် အလုပ်တချို့ကို အပြတ်ဖြတ်ချင်တာနဲ့ပို့စ် လေးတွေက ခေါင်းထဲကနေ ထွက်လာခွင့် မရခဲ့ကြရှာဘူး၊ ပြန်လာတဲ့အခါကျရင် သူတို့လေးတွေ အပြင်ရောက် လာအောင် လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပါပဲခင်ဗျာ၊
အားလုံးပဲ ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ပါစေ...။ ။
၂၂ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၀၉
Posted by ညီလင်းသစ် au 22.1.09 1 comments
Labels: Current, Voyage
သားကလေး, Johanna နှင့် baby-sitting
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က သားကလေးရဲ့ဘဝမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် baby-sitting ဆိုတာကို မြည်းစမ်းခွင့်ရတယ်၊ အခု ၁၆ လသားအရွယ်အထိ သားက အဖေ၊အမေကလွဲရင် အဖွားတို့အဒေါ်တို့နဲ့ပဲ နေဖူးသေးတယ်၊ ကျနော်တို့ အလုပ်သွားတဲ့အချိန် တစ်ပတ်မှာ ၂ ရက် အမေဖက်က အဖွားက ထိန်းပေးတယ်၊ အဖွားကိုတော့သူ ကောင်း ကောင်းသိနေပြီ၊ သူ့ကို အဖွားအိမ်မှာ ထားခဲ့ရင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ နေခဲ့တယ်၊
အခု baby-sitting ကတော့ သူ့အတွက် မိသားစုဝင် မဟုတ်တဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် နေရခြင်း ပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် လာထိန်းပေးတဲ့ ကောင်မလေးက တခြားသူစိမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်တို့မိတ်ဆွေ လင်မယားရဲ့ သမီးလေးပါ၊ Johanna လို့ခေါ်တယ်၊ သူက သားကလေးကို သိပ်ချစ်တယ်၊ တစ်ရက်သူတို့အိမ် အလည်သွားကြရင်းနဲ့ မအိမ်သူက Johanna ကို ကလေးထိန်းပေးချင်လားလို့ ကျီစယ်ရင်းမေးလိုက်တယ်၊ Johanna ကပျော်သွားပြီး ချက်ချင်းပဲ ထိန်းပေးမယ်လို့ ပြန်ဖြေတယ်၊ ပြီးတော့ သူ့အမေကို လှမ်းကြည့်တော့ သူ့ အမေကလည်း သဘောတူတယ်လို့ လှမ်းပြောတယ်၊
အခုလို Johanna က သားကလေးကို ထိန်းပေးမယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့လည်း အပြင်သွားပြီး တခြားလုပ်စရာ တွေလုပ်လို့ရတယ်၊ သူ့အတွက်လည်း သားကလေးနဲ့ ကစားခွင့်ရမယ်၊ နေ့စဉ်ဘဝကနေ တမျိုးတဖုံ အပြောင်း အလဲဖြစ်မယ်၊ ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်အားခနဲ့ မုန့်ဖိုးရှာခွင့်ရမယ်လေ၊ တကယ်တော့ Johanna တို့မိသားစုက ချောင်ချောင်လည်လည်ထဲကပါ၊ သူ့မိဘတွေက ကလေးထိန်းလို့ ရမယ့်မုန့်ဖိုးလောက်ကို ကောင်းကောင်းပေး နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုလိုဆိုတော့ Johanna အတွက် သူကိုယ်တိုင်ရှာရတဲ့အခါ ငွေရဲ့တန်ဖိုးကို ပိုသိမယ်၊ ကျနော်တို့အတွက်လည်း ကူဖော်လောင်ဖက် ဖြစ်စေတယ်၊ သူ့မိဘတွေကလည်း ကျနော်တို့ကို ကူညီနိုင်လို့ ဝမ်းသာမယ်၊ သုံးဦး သုံးဖလှယ်အကျိုးရှိတဲ့ ကိစ္စပါပဲ၊
ရယ်စရာကောင်းတာ တခုက Johanna ဟာသားအတွက် ပထမဦးဆုံး မိသားစု ပြင်ပကလာတဲ့ ကလေးထိန်း ဖြစ်သလို သားဟာလည်း Johanna အတွက် ပထမဦးဆုံး မိသားစုပြင်ပမှာထိန်းရတဲ့ ကလေးပါ၊ ဒါပေမယ့် အားလုံး ချောချောမောမောပါပဲ၊ ကလေးအများစုရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သားကလေးဟာလည်း Johanna ကိုအကဲ ခတ်ရင်း သူကျွေးတဲ့ ထမင်းကိုစားလိုက်၊ သူသိပ်တဲ့အခါ အိပ်လိုက်၊ နိုးလာတော့ သူနဲ့ကစားလိုက်နဲ့...၊ ၁၂ နှစ် ဆိုတဲ့အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင်ပဲ Johanna က သားကလေးကို ပျော်ရွှင်အောင် ထားရင်း ထိန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ။
Le fiston, Johanna et baby-sitting
Notre fistonaconnu ce que c’est un baby-sitting (la garderie) le samedi dernier. Jusqu’à maintenant, à l’âge de 16 mois, il n’avait l’habitude de rester qu’avec sa grand-mère et sa tante en nos absences. Pendant la semaine où on travaille, il passe2jours avec sa grand-mère maternelle qu’il connaît bien. On peut bien le laisser chez elle sans le moindre souci. Il y est content.
Le baby-sitting qu’ilaconnu maintenant, c’est pour la première fois avec quelqu’un en dehors de la famille. Mais, la baby-sitter n’est personne d’autre que la fille du couple d’amis à nous : Johanna. Elle aime bien notre fiston. Un jour, on leurarendu visite chez eux et mon épouseademandé à Johanna si elle voulait garder Alexy pour une fois. Et là...Johannaatout de suite répondu ‘ oui ’ d’un air très joyeux et tout en regardant sa maman. Sachant bien ce que sa fille voulait demander, la mamanadonné son feu vert avec un grand sourire.
Ainsi, on pourrait aller dehors et faire ce qu’onaà faire. Pour Johanna, elle pourrait jouer avec Alexy et ça serait un petit changement dans la vie quotidienne. De plus, elle pourra avoir l’argent de poche, gagné de son propre effort. En fait, la famille de Johanna ne semble pas faire partie des gens qui ont la difficulté financière et certes, ses parents ont les moyens de lui offrir l’équivalent de l’argent de poche gagné par baby-sitting. Néanmoins, si elle est payée pour ce qu’ellearéellement fait, elle comprendra mieux la valeur du travail et de la récompense. Pour nous, ça serait un petit service non-négligeable. Quant à ses parents, ils seraient contents pour nous et fiers de leur fille. Que du bonheur pour tout le monde !
Ce qui est un peu drôle, c’est que pour notre fiston, Johanna est la première baby-sitter en dehors de la famille et vice versa, pour Johanna, Alexy est le premier enfant à garder en dehors de la famille. Mais, tout s’est très bien déroulé. Comme la majorité des enfants, notre filsamangé ce que Johanna lui avait donné, s’est couché quand elle l’a mis au lit etajoué avec elle lors du réveil tout en observant et se posant des questions sur la personnalité de cette mignonne demoiselle qui était devant lui. Malgré ses 12 ans, Johannaafait un travail remarquable dans la joie et la bonne humeur pour garder notre fiston unique bien aimé.
၁၇ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၀၉
Posted by ညီလင်းသစ် au 17.1.097comments
Labels: Diary, Photo, Souvenirs
Canon EOS 450d, 18 mm, f/13, 1/400, ISO 200
Canon EOS 450d, 28 mm, f/11, 1/200, ISO 200
Canon EOS 450d, 63 mm, f/10, 1/250, ISO 200
Canon EOS 450d, 35 mm, f/13, 1/250, ISO 200
Posted by ညီလင်းသစ် au 16.1.092comments
ဒီနေ့အလုပ်မှာ Elena ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးနဲ့ တွေ့တော့သူမျက်နှာမကောင်းတာ သတိထားမိတယ်၊ ဒါနဲ့မေးကြည့် တော့မနေ့က သူ့ယောက်ျားအလုပ် ပြုတ်သွားလို့တဲ့၊ မနက်ပိုင်း လုပ်နေကျ ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး မှာဆုံးဖြတ်ပြီး တခါတည်း ထုတ်လိုက်တာပါပဲ၊ သူ့ယောက်ျားက Karcher ဆိုတဲ့ high pressure သုံးရေပိုက်တွေ ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်နေခဲ့တာ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက် ရှိနေပြီ၊ အခုတော့ ၃ လအ တွက်လစာနဲ့အတူ ခွင့် ၇ ပတ်ပေးလိုက်တယ်၊ အဲဒါပြီးရင်တော့ ပြန်လာစရာ မလိုတော့ဘူးတဲ့၊ မနှစ်ကတည်းက စ,လိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကြောင့် ဝန်ထမ်းတွေ လျှော့ချတဲ့သတင်းတွေကို နေရာတိုင်းမှာ ကြားနေရတယ်၊ အခု Elena ရဲ့ယောက်ျားက အကြီးအကျယ်စိတ်တွေတိုပြီး တပြိုင်တည်းမှာ စိတ်ဓါတ်တွေကျ နေတယ်-တဲ့၊ သူ့အသက်က ၅၉ နှစ်ရှိပြီမို့ နောက်အလုပ်တစ်ခုကို လွယ်လွယ်နဲ့တွေ့ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး၊ ဆွစ်ဇာလန်မှာ လုပ်သက်ပင်စင်က ၆၅ နှစ်ဆိုတော့ သူ့ကို တော်ရုံလူက ဘယ်ခန့်တော့မှာလဲ၊ အလုပ်လက်မဲ့ တွေကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ရုံးမှာစာရင်းသွားသွင်းရင် တစ်နှစ်စာလောက်တော့ လစာရနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါပြီးရင်တော့ ပြီးပြီဆိုတော့ သူစိတ်ဓါတ်ကျမယ်ဆိုလည်း ကျစရာပါပဲ၊
ကျနော့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုက ဒါရိုက်တာအဆင့်ရှိသူ တစ်ယောက်ပါ၊ အခု ဝန်ထမ်းလျှော့ချရေးဂယက်ကြောင့် သူ့ရာထူးလည်း ခပ်လှုပ်လှုပ်လို့ပြောတယ်၊ ဒီစီပွားရေး အကျပ်အတည်းဟာ ကော်လာဖြူ၊ ကော်လာပြာဝန်ထမ်းတွေကအစ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေသူတွေအလယ် တပိုင်တနိုင် အိမ်တွင်းမှုလေးတွေ လုပ်နေသူတွေအဆုံး အားလုံးကို အနည်းနဲ့အများ ထိခိုက်စေပါတယ်၊ ပုဂံညောင်ဦး မြင်းကပါ ဝက်ကြီးအင်းက လူတွေ မိရိုးဖလာ တစ်သက်လုံးလုပ်လာတဲ့ ယွန်းလုပ်ငန်းဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေ တော့လို့ ဒီအတိုင်းထိုင်နေတဲ့လူကထိုင်၊ ရွှေကျင်တဲ့လူကကျင် ဖြစ်ကုန်တဲ့အကြောင်း သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဖတ်ရ ပြန်တယ်၊ ကမ္ဘာဟာရွာကြီး တစ်ရွာဖြစ်လာခဲ့ပြီ ဆိုတော့ရွာဦးရဲ့ဂယက်ဟာ တစ်ရွာလုံးကိုရိုက်ခတ်စေတယ်၊ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ အပြန် အလှန်ဆက်သွယ်မှု ပုံစံသစ်တွေအရ ဘုန်းကြီးမှု ရွာပတ်တာပဲလို့ ပြောလို့မရတော့ ပါဘူး၊
ကျနော့်သူငယ်ချင်းဆန်းထွန်း စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလက ရောက်လာခဲ့တယ်၊ မူလလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာက manpower field ထဲမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် စီးပွားပျက်ကပ်ကြောင့် ထင်သလိုဖြစ်မလာတော့ ဘူး၊ အခုဒီကောင် ကျောင်းပြီးကတည်းက ချောင်ထိုးထားခဲ့တဲ့ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို ပြန်ပြီးအရောင်တင်ဖို့ လုပ်နေရပြီ၊ တဆက်တည်းမှာ မြန်မာပြည်က ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းတွေကို သတိ ရမိတယ်၊ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ပြီးကတည်းက ကျသွားလိုက်တဲ့ tourism၊ ပြန်ထမယ်ကြံကာရှိသေး နာဂစ် ကရိုက်ချသွားပြန်တယ်၊ အခုတစ်ခါ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်...၊ တဖက်ကလည်း တစ်ရစ်ပြီးတစ်ရစ် ကျပ်လာတဲ့ စားဝတ်နေရေး...၊ ဆိုးဝါးပြီး ကံမကောင်းတဲ့နှစ်လို့ အများကယူဆကြတဲ့ ၂၀၀၈ အလွန်မှာ အားလုံးက ၂၀၀၉ ကိုမျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ ကြိုဆိုကြတယ်၊ သူကကော...? တကယ်ပဲ ကံကောင်းခြင်းတွေ သယ်ဆောင်လာမှာ လား? လောလောဆယ်တော့ အဖျားရောဂါ အကြီးအကျယ်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဝေဒနာသည်တစ်ယောက်လို ခပ်ယဲ့ယဲ့ နဲ့ နာလန်ထလာဆဲပါပဲ၊
အလုပ်ကအိမ်ကိုအပြန်မှာ လေးလံလွန်းတဲ့ ဝန်ထုပ်ကြီးတစ်ခုကို ထမ်းပိုးထားရသလို ခြေလှမ်းတွေက မသွက် ချင်ဘူး၊ တော်ပါသေးရဲ့...တနင်္ဂနွေနေ့က ချက်ထားလို့ စားစရာအဆင်သင့် ရှိနေတယ်ဆိုပြီး အနည်းငယ် သက်သာရာ ရမိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဗိုက်မဆာတော့ဘူး၊ အပင်ပန်းခံ ချက်ထားတဲ့ ဟင်းတွေကရှေ့မှာ...။ ။
Posted by ညီလင်းသစ် au 13.1.092comments
Labels: Diary, Voyage
ဒီတနင်္ဂနွေရဲ့ နေ့လည်ခင်းကတော့ ဟင်းချက်တာနဲ့ပဲ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ်၊ နေ့လည် ၃ နာရီခွဲလောက်ကစ, ချက်တာ ညနေ ၆ နာရီခွဲကျော်ကျော်မှာမှ ပြီးတယ်၊ ဒီညနေစားဖို့အပြင် လာမယ့်တပတ်မှာပါ စားနိုင်အောင် ကြိုပြီးချက်ထားလိုက်တယ်၊ ညနေတိုင်း လုပ်နေရမယ့်အတူတူ အခုတစ်ခါပဲ အပင်ပန်းခံလိုက်မယ်ဆိုပြီး လုပ် လိုက်တာပါပဲ၊
အလုပ်ကနေ ပြန်လာတဲ့တချို့ညနေတွေမှာ စားစရာဘာမှ မရှိဘူး၊ မဟုတ်သေးဘူး၊ ကျနော်ပြောချင်တာက စားစရာက ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ရှိတယ်၊ ချက်ထားပြီးသား ဘာမှမရှိတာ...၊ ကျနော်ကလည်း ဒီဖက်ပိုင်းရက်တွေ မှာ အတော်လေးပျင်းနေတယ်၊ ဘာကြောင့်မှန်းလည်း မသိဘူး၊ လူက ဒီဇယ်အင်ဂျင်တပ်ထားတဲ့ ကားတစ်စီးလို ချမ်းချမ်းစီးစီး ရာသီဥတုကြားမှာ စက်ကလွယ်လွယ်ကူကူ နှိုးလို့မရချင်ဘူး၊ ဗိုက်ကလည်းဆာ... ချက်ဖို့ကလည်း ပျင်း...၊ အဲဒီလိုအခါတိုင်းမှာ မအိမ်သူက ပြင်ဆင်လေ့ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းလိုလို သူ့ချည်းပဲလုပ်ခိုင်းလို့ ဘယ်ကောင်းမှာလဲ၊ သူ့မှာလည်း အလုပ်တဖက်နဲ့ ပင်ပန်းရှာမှာပေါ့၊
ဒီတော့ ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းမှာ စမ်းပြီး ဟင်းတွေကြိုချက်ထားကြည့်လိုက်တယ်၊ တစ်ပတ်စာတော့ မရည်ရွယ်ပါ ဘူး၊ ၂ ရက် ၃ ရက်လောက်ဆိုရင်ပဲ မဆိုးဘူး၊ ချက်တာကတော့ သခွားဖရုံကြော်ချက်၊ ကြက်သားအာလူးဆီပြန်၊ ခရမ်းသီးနှပ်နဲ့ အမဲအူကြမ်းကို ချင်း၊ ငရုတ်သီးနဲ့ အခြောက်ကြော် စ,တာတွေပါပဲ၊ ကျနော်က စိတ်ကူးတည့်ရာ လျှောက်ချက်လေ့ရှိတော့ တခါတလေလည်း အစပ်အဟပ်က မတည့်တတ်ပြန်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကိစ္စမရှိဘူး၊ စားစ ရာတစ်ခုခုရှိနေရင် ပြီးတာပဲမဟုတ်လား၊ စားဖို့အသက်မရှင်ချင်ဘဲ အသက်ရှင်ဖို့ပဲ စားချင်တယ်။
Posted by ညီလင်းသစ် au 11.1.094comments